၉ နှစ်တာအတွင်း ၉၀ ရက် - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစိတ်၊ ပိုမိုခိုင်မာသောအာရုံစိုက်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုနားလည်မှုရှိခြင်း - Brain On Porn
၉ နှစ်တာအတွင်း ၉၀ ရက် - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစိတ်၊ ပိုမိုအာရုံစိုက်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ခြင်း၊
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီစိန်ခေါ်မှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါပထမ ဦး ဆုံးမှာလုပ်နိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့တစ်ခုခုပဲ, ဒါပေမယ့်ငါမကြာမီငါဘယ်လောက်စွဲဘယ်လောက်သဘောပေါက်လာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့မင်းသိတဲ့အတိုင်းမလွယ်ကူဘူး။ အခက်အခဲများနှင့်သွေးဆောင်မှုများကြောင့်ခဲယဉ်းသည်။ ငါအကြိမ်များစွာလဲကျသွားပြီး PMO မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်လိုက်တယ်။ ငါအဲဒီလိုလုပ်တိုင်းအချိန်ကုန်ခံချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိရသေးပေမယ့် PMO ဟာလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Au-Natural လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ဖို့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ပါစေငါအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ရှေ့သို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဤမျှမြန်မြန်ရှေ့သို့ပြေးပါ။ ငါ NoFap အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူတက် join ။ ငါလိုချင်တာပဲ နောက်ဆုံးရက် ၉၀ သန့်ရှင်းတယ် အတော်လေးလက်တွေ့မကျဘူး အကျိုးကျေးဇူးများ - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစိတ်၊ ပိုမိုအားကောင်းသောအာရုံစိုက်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုသိနားလည်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်ရခြင်း
•ရပ်ရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းရှိသည်။ ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့ကပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။ ငါမရှိဘဲလုပ်ခဲ့သူအချို့ကိုငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများကြီးပိုအများကြီးပိုခက်ခဲရှာပါ။
“ ဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတာလဲ၊ သူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသည်းမခံနိုင်ဘူး” - Friedrich နစ်ရှေး
သင်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံပါ။ ၎င်းသည်ပထမနှစ်လသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ စစ်မှန်။ ရေတွက်နိုင်သောတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းသည်ကျေနပ်မှုအနည်းငယ်ရရှိရုံသာမကသင်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်သက်သေပြရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ယခင်စံချိန်အထက်တစ်ရက်တည်းတောင်မှသင်၏ယခင်အဟောင်းထက်တစ်ရက်ရှိနေသေးသည်။
“ မင်းသာယာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဘယ်နေရာကရပ်တန့်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ - Orson Welles
•အအေးခန်း။ လုပ်ပါ သူတို့ဟာပူပြင်းတဲ့တစ်ခုထက် ၅ ဆပိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။ ဒါကို PMO ကနေတားဆီးပေးတာကရေခဲရေမဟုတ်မှန်းသတိရပါ။ မင်းကတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားတယ် ကောင်းမွန်သောရေပူရေ၏ပျော်မွေ့မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စည်းကမ်းတင်းကျပ်သော၊ ဆူညံအော်ဟစ်သော၊ adrenaline မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း၊ အဓိပ္ပာယ်မသက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်အေးခဲနေသောရေအေးတို့အတွက် NoFap ၏အနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည်။
“ ငါဘယ်တော့မှအကြီးမြတ်ဆုံး၊ - ယာကုပ်အမျိုးကို Acebo
• NoFap နှင့် PornFree လက်-In-လက်ကိုသွားသင့်ပါတယ်။ porn အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့် 1000% အားဖြင့် PMO များ၏အခွင့်အလမ်းတိုးပွားစေပါသည်။ ထိုသို့ဤနည်းစဉ်းစားပါ: ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ, အောင်မြင်မှုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်း 90% ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်သင့်သည်။ porn နှင့်အတူ, သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်ခုတည်းသောဂဏန်းပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူ့ဟာသူ MO ကိုအဖြစ်နှစ်သက်ဖွယ်မဖြစ်လို့ပဲ။ porn ဒီဂိမ်းအတွက်မုန့်နှင့်ထောပတ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဝှမ်းဂရုတစိုက်ကိုနင်းနယ်။ သငျသညျ porn ကိုကြည့်လျှင်သင်နေတုန်းပဲဒါကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို, အများကြီးနိမ့်တာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ PornFree တံဆိပ်စဉ်းစားပါ။ ဒါဟာတကယ်ကူညီပေးသည်။
“ ဘယ်နေရာကိုမဆိုရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းကမင်းနေတဲ့နေရာမှာနေဖို့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်” - အမည်မထုတ်ဖေါ်သော
•နေ့တိုင်းအန္တရာယ်ရှိသောနေ့ဖြစ်သည်။ PMO ကိုချောကလက်စားရန်စွဲလမ်းသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်နေရာအနှံ့တွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ လူများစွာသည်နေ့စဉ်ချောကလက်ကိုစားကြသည်။ ဒါကဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံကုန်ပစ္စည်း။ သင်သည်ချောကလက်ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ မရှောင်ဘဲနေလျှင်ပင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများမှာတစ်နေ့တွင်ထိုချိုမြိန်လှသည့်ဘားကိုကိုက်ရန်သွေးဆောင်စရာကောင်းသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မျက်နှာသာပေးပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်ပေါ်လာတဲ့အခါ“ မဟုတ်ဘူး” လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင်ငါပေးမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မသေချာဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါပြောခဲ့ပြီးသောကြောင့်၊ ပြီးတော့အဲဒီချောကလက်ဘားကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်ပြီးဘဝလို့လူသိများတဲ့အရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့စွန့်စားစားတဲ့အစာကိုစားပြီးပြန်စားပါ။
"အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဖန်တီးတာပဲ" - ပတေရုသ Drucker
•ကျွန်ုပ်၏ကူညီရန်ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်တွင် .txt ၌သိမ်းထားသည့်အရာ။ သင်၌တမ်းတနေသည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါ။ သင်အလုအယက်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်ထိန်းချုပ်မရသောအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခံစားချက်ကိုကြောက်လန့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်စိုးရိမ်မှုများနှင့်အရှက်ရစေခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဲဒီအစားတပ်မက်မှုအပေါ်မှာမင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပါ၊ အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပျက်စေပြီးသင့်ဘ ၀ ကိုဆက်လုပ်ပါ။ အတွေ့အကြုံများများလွန်းပါကသင်နှင့်စကားပြောနိုင်သူတစ် ဦး (ကုထုံး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိဘ၊ သို့မဟုတ် ၁၂ ဆင့်ပံ့ပိုးသူ) ရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုမှာမကြာခဏဖြစ်လာပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကုသမှုမခံရပါကသူတို့၏ပြင်းထန်မှုမှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ဖွယ်မရှိချေ။ စွဲလမ်းမှုသည်စွဲလမ်းမှု၏အဖြစ်မှန်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူဘာလုပ်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
“ စိတ်ပညာတွင်အလေးအနက်ဆုံးသောအယူအဆတစ်ခုမှာသင် (လုပ်ရပ်တစ်ခု) လုပ်သည့်အခါသင်၏စိတ်ခံစားမှုသည်နောက်သို့လိုက်သွားသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သော (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းမဲ့ရန်ပတ်ပတ်လည်၌စောင့်နေလျှင်၊ မင်းလုပ်မှာပါ၊ - Sean Cooper က
ငါဒီနေ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အကြံဥာဏ်များလို့ထင်ပါတယ် ငါ့မှာအများကြီးအများကြီးရှိတယ်၊ ၉၁ ရက်အတွင်း၊ ၃၆၅ ကိုဆက်သွားချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မသွားချင်ဘူး။ အဆုံး၌ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်မလားကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ အဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နေ့တိုင်းပြောတာပါ ပြီးတော့ငါကလုပ်ပါ။ ခိုင်ခံ့နေပါ၊ fap / femstronauts! တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ရက်သာကြာသည်။
“ အဲဒါပြီးသွားတဲ့အထိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်” - နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား
Edit: Wow သောပုံစံချပေးယူတာပဲ။ ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူး။ အကြှနျုပျ၏မကောင်းတဲ့လူတွေ
LINK - 90 နှစ်များထဲမှာ9နေ့ရက်များ